लुम्बिनीमा मोदीका ६ घण्टा - Khula Patra
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ ०२, २०७९
प्रकाशित समय: २२:३९:५३
बुटवल । भारतीय प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि अघिल्लो दिन नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित मन्त्री र सरकारी उच्च अधिकारी लुम्बिनी आइसकेका थिए। लुम्बिनीका विभिन्न प्रवेशद्वारमा मोदीको स्वागतका लागि गेट तयार थिए। मायादेवी मन्दिर पनि चिटिक्क पारिएको थियो। बुद्धजयन्तीकै अवसर पारेर मोदीको लुम्बिनी भ्रमण गरे।
बुद्धजयन्तीलाई लुम्बिनीमा त्यसै पनि भव्य रुपमा मनाउने गरिन्छ। त्यसमा पनि नेपाल-भारतका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएकाले थप सिँगारिएको थियो। यसले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई थप भव्य देखियो।
विश्वका बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी हो। बेलाबेलामा बुद्धजन्मस्थलबारेमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिने मोदीले भ्रमण गर्ने भएपछि चासोका साथ हेरिएको थियो। मोदीको अभिव्यक्तिका विषयमा उत्सुकता थियो। यसपालिको लुम्बिनी भ्रमणमा मोदीले बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा नै पर्नेबारे आफू स्पष्ट भइसकेको सन्देश दिएर फर्केका छन्। ५ हजार मानिस अट्ने क्षमता रहेको अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिष्ट सम्मेलन केन्द्र र ध्यानकेन्द्रमा आयोजित बुद्धजयन्ती समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले सुरुमा नै, ‘वैशाख पूर्णिमाकै दिन भगवान बुद्धको पवित्र जन्थलोमा आउने अवसर पाएँ, यो मेरो लागि जीवनकै अविस्मरणीय हुनेछ।’
नेपाल-भारत सम्बन्धलाई बुद्धले पारिवारिक बनाएको समेत उनले उल्लेख गरे। लुम्बिनीमा बुद्धको जन्म सिद्धार्थ गौतमबुद्धका रुपमा भएको, उनले बोधगयामा बुद्धत्व प्राप्त गरेको र कुशीनगरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेको भएको प्रसंग जोड्दै उनले यी तिनै काम बुद्धजयन्तीकै दिन भएको इतिहास उल्लेख गरे। मोदीले नेपाल-भारतको सम्बन्ध हिमालय जस्तै अटल र हिमालय जतिकै पूरानो भएको बताए। मायादेवी मन्दिर पुगेर बुद्धको चेतना, ऊर्जाको अलग्गै अनुभूति भएको बताए।
मोदीले नेपाल-भारतको संस्कार र परम्परामा समेत उस्तैउस्तै रहेको चर्चा गरेका थिए। समारोहलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली भाषामै बोलेर कार्यक्रममा सहभागीहरूको ताली लिएका थिए।
राजनीतिक रुपमा समेत कुटिल र छिमेकी राष्ट्रलाई समेत आफ्नो पकडमा राख्न सिपालु मानिने मोदीले लुम्बिनीबाट पनि भारत नेपालको असल छिमेकी र मित्रराष्ट्र भएको कुरा दोहर्‍याए। मोदीले कुनै बेला आफैँले बुद्धजन्मस्थल नेपाल नभएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको भने आफैले लुम्बिनीमा बोलेको अभिव्यक्तिले खण्डित गरे। लुम्बिनीमै बुद्ध जन्मेको कुरालाई जोड दिँदै सम्बोधन गरेपछि नेपालीहरुमा मोदीप्रतिको दृष्टिकोण फरक पार्ने विश्वास गरिएको छ। साथै लुम्बिनीमा भारतीयको आर्कषण थप बढ्ने छ।
शक्ति राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केवल धार्मिक र सांस्कृतिक मात्रै हो त भन्नेमा भने शंका गर्न सकिन्छ। तर, मोदीले बुद्धजयन्तीको समारोहमा भनेका छन–‘नेपाल आउदा कुनै राजनीतिक भ्रमण होइन, आध्यात्मिक भ्रमणको अनुभुति हुन्छ।’ उनले यो वाक्य नेपालीमै उच्चारण गरेका थिए। मानिसको मास मनोविज्ञानमा खेल्न सक्ने मोदीले लुम्बिनीको विकासमा भारत सरकारसमेत सहयोगी बन्ने बताए। मोदी नेपाल आएका बेला कुनै न कुनै धार्मिकस्थल पुग्छन्। कहिले पशुपति दर्शन गर्छन् त कहिले मुक्तिनाथको खुला आकाशमा निस्फिक्री बसेर आनन्द लिन्छन्। कहिले जनकपुरधाममा रामसीताको पूजामा सक्रिय सहभागिता जनाउँछन् त कहिले नाममा भ्रमण गर्ने गरेका छन। उनको भ्रमण धार्मिक भनेपनि राजनीतिक पनि हुने विश्लेषक बताउँछन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बनी भ्रमणलाई कूटनीतिक विजयका रूपमा अर्थ्याउने परराष्ट्र मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन्। ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको यो भ्रमण कुटनीतिक रुपमा नेपालको विजय हो। मोदीको लुम्बिनी भ्रमणले भगवान गौतमबुद्धको जन्मस्थानको विवाद अन्त्य भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानेछ। यो भ्रमणमार्फत् भारतले धार्मिक सांस्कृति सम्बन्ध, धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन, पारिस्पारिक कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारका रुपमा महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने। धार्मिक तथा सांस्कृति कूटनीतिलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश यस भ्रमणमा मार्फत मोदीले दिन चाहेको वाग्लेको भनाइ छ।
बुद्ध पुर्णिमाका दिन भारतीय प्रधानमन्त्रीको लुम्बिनी भ्रमणले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका साथै दुई देशबीच सद्भाव र विश्वास बढाउन महत्त्वपूर्ण हुने अर्का कूटनीतिज्ञ डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। ‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको पारिस्पारिक सदभाव र विश्वास बढाउनुका साथै धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
भ्रमणमा भारतीय हस्तक्षेप
समग्रमा मोदीको भ्रमणले लुम्बिनीको महत्त्व थप उजागर भएको छ। विश्वमा मोदीको भ्रमणले नयाँ तरंग पनि ल्याएको छ। तर, एउटा शक्ति राष्ट्रको भ्रमण छोटो सूचना र तयारीका बीच आयोजना हुँदा भ्रमणमा व्यवस्थापकीय कमजोरी भेटिए। प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु लुम्बिनीमा त आए। तर, लुम्बिनीमा छिमेकी राष्ट्रको कार्यकारी प्रधानमन्त्री आउँदै गर्दा त्यहाँका स्थानीयमा भने कुनै उत्साह थिएन। बरु त्यहाँको पसल बन्द गर्नुपरेकोमा दुखेसो पोख्दै थिए। यसको अर्थ लुम्बिनी विकास कोषले कमजोरी गर्‍यो।
मायादेवी मन्दिरमा मोदीको फोटो र भिडियो खिच्न रुपन्देहीका पत्रकार वञ्चित भएको लुम्बिनी प्रेस क्लबका अध्यक्ष नरेश केसीले बताए। सुरक्षा व्यवस्थापनका नाममा मोदीको गतिविधिमा पत्रकारलाई टाढा राख्न खोजिएको थियो। करिब एक सातादेखि भारतीय सुरक्षाकर्मीले यहाँको अवस्था बुझेका थिए भने सोमबार मोदीको भ्रमणमा सुरक्षा चेकजाँज र सहभागीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउने नगराउने निर्णय समेत उसैले गरेको थियो।
६ घण्टासम्म के-के गरे मोदीले?
लुम्बिनीमा मोदीले ६ घन्टा बिताए। उनी भारतीय सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् सिधैं लुम्बिनीस्थित हेलिप्याडमा अवतरण गरेका हुन्। मोदी बिहान १०:३० बजे लुम्बिनीमा आइपुगेका हुन्।
लुम्बिनीमा पाइला टेक्नासाथ सुरक्षा प्रबन्धको मिलाएपछि मायादेवी मन्दिर ११ बजे पुगे। हिन्दू धर्ममा आस्थ राख्ने मोदी मायादेवी मन्दिरको प्रवेशद्वार पुग्नासाथ निष्ठाका साथ लुम्बिनीको माटो छोए। त्यसलगत्तै मोदीलाई लुम्बिनीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नागरिक उड्डयन तथा संस्कृतिमन्त्री प्रेम आले लगायतले स्वागत गरे। करिब आधा घण्टा मायादेवी मन्दिरमा बिताएका मोदीसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले मायादेवी मन्दिरको अवलोकन गरे।
मोदीले मायादेवी मन्दिर आसपास अवलोकन गर्दा पनि रुचि देखाएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँगै मोदीले मन्दिरमा प्रार्थना गरेका थिए। मायादेवी मन्दिरमा मार्कर स्टोनमा फूल अर्पण गरी पूजा गरे। पुष्करिणी पोखरीको अवलोकन र अशोक स्तम्भ अगाडि दीपप्रज्वलन गरेका मोदीले मायादेवी मन्दिरमा रहेको बोधिवृक्षमा पानी हाले। आगन्तुक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरे।
मायादेवी मन्दिरपछि भारतको आईबीसीद्वारा निर्माण गरिएको विहारको शिलान्यास गर्नतर्फ लागे। आइबीसीले निर्माण गर्न लागेको विहार शिलान्यासपछि लुम्बिनीमै रहेको होटल पवनमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गरे। भेटवार्तापछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतमा गरिएको दिवाभोजमा सरिक भए।
त्यसलगत्तै लुम्बिनी विकास कोषले आयोजना गरेको २५६६औं बुद्धजयन्तीको अवसरमा आयोजित मूल समारोहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गरे। सम्बोधनपछि साढे ४ बजे मोदी स्वदेश फर्किए।